Home » Cayaaraha » Ururka Cayaartooyda Soomaaliyeed oo go’aanno muhiima gaaray (SAWIRRO)
Kulan ay isugu yimaadeen xubnaha Ururka Cayaartooyda Soomaaliyeed ee (Somali Athletes Commission) iyo qaar ka mid ah madaxda Guddiga Olombikada Soomaaliyeed (GOS) ayaa waxaa laga soo saaray go’aanno muhiim ah oo quseeya ururka.
Kulankan oo uu shir-guddoominayay guddoomiyaha GOS mudane Cabdullaahi Axmed Tarabi ayaa waxaa sidoo kale ka qeybgalay guddoomiy-sharafeedka GOS mudane Cabdulqaadir Ibraahim Gacal (Abkoow), Xubno ka tirsan Guddiga Fulinta GOS, guddoomiyihii hore ee Ururka Cayaartooyda Soomaaliyeed Xasan Axmed Barre (Himilo), iyo xubnaha ururka.
Kulanka ayaa waxa uu daba-socday shir ay xubnaha guddiga fulinta ee GOS dhawaan ku yeesheen Muqdisho, kaas oo laga soo saaray qodobbo ay ka mid yihiin go’aanno wax looga beddelayo dastuurka GOS, gaar ahaanna arrimaha quseeya ururka cayaartooyda.
Intii u kulanka socday, ayaa waxa ay xubnaha ururka cayaartooydu falanqeeyeen go’annadii shirka guddiga fulinta GOS kasoo baxay ee ku saabsanaa ururka iyo cidda xaqa u leh xubinnimadiisa, waxaana ay isku raaceen in sida ay tahay loo meel-mariyo soo-jeedintii ka timid guddiga olombikada aduunka ee (IOC), taas oo ku saabsanayd in ururka cayaartooyda ay xubno ka noqdaan cayaartooyda ka qeybgashay tartannadii Olombikada ee ugu dambeeyay.
Dhinaca kale, kulanka ayaa waxaa lagu go’aamiyay in xilka guddoomiyenimada ururka cayaartoyda Soomaaliyeed uu sii haayo guddoomiyihii hore ee ururkaas mudane Xasan Axmed Barre (Himilo) Waxaana sidoo kale uu ururku go’aan ku gaaray in shirweynaha GOS ee soo socda ay magaca ururka uga qeybgalaan Axmed Xuseen Xasan iyo Maryan Nuux Muuse oo labaduba horay uga qeybgalay cayaaro Olombik ah oo dunida ka dhacay-.
Dhankoodana, guddoomiyaha GOS mudane Cabdullaahi Axmed Tarabi iyo guddoomiye-sharafeedka mudane Cabdulqaadir Abkow ayaa hadallo ay kulanka ka jeediyeen waxa ay kaga hadleen muhiimadda ay cayaartoydu u lee yihiin ka-miradhalinta dadaalada lagu horumarinayo cayaaraha dalka, iyaga oo ururka cayaartoyda ku dhiirrigeliyay in uu sii wado dadaalada uu ku bixinayo ilaalinta danaha cayaartoyda iyo la-socoshada xaaladahooda.
Ururka Cayaartooyda Soomaaliyeed ayaa la dhisay sannadkii 2006-da, iyadoona sannadkaasi uu xubin ka noqday Ururka Cayaartooyda Adduunka, oo la dhisay sannadkii 1981-kii.